တရုတ်ယက်ထည်အလှတပ်ထားသောကျောပိုးအိတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Zhihongda
1. ပစ္စည်း: 40-100 gm ရက်မထိုး Polypropylene အိတ်
2. အမျိုးမျိုးသော & အကြီးစားအရွယ်အစား, Multi-Purpose Drawstring အိတ်
(၃) ဈေးပေါသောအိတ်များသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လက်ကားဆွဲဆွဲအိတ်သည်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောစျေးပေါသောအံဆွဲအိတ်သည်ကြာရှည်စွာတည်ရှိလိမ့်မည်၊ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်အဖြစ်အပျက်ကိုစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းကြော်ငြာရန်အလွန်သင့်တော်သည်။
သင်၏အရောင်းမြှင့်တင်မှုများအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အရွယ်အစား၊ သင် (အပူချိန်နိမ့်) သံကိုလွှဲပြောင်းခြင်း, အပူစာနယ်ဇင်း, မျက်နှာပုံနှိပ်ခြင်း, ပန်း, လွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ခြင်း, အပြည့်အဝအရောင်လွှဲပြောင်း, pad ပါပုံနှိပ်, overprinting နိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် အနက်ရောင်မဟုတ်သောချည်ဆွဲကြိုးအိတ်၊ ရက်ကန်း၊ အရက်၊
အရွယ်အစားနှင့်အထူ 15 * 20, 20 * 27, 25 * 30, 30 * 40, 35 * 45, 40 * 50, 45 * 55cm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ယက်မဟုတ်သောအိတ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည့်အတိုင်းလွင်ပြင်၊ အောက်၊ ဘေး၊
နောက်တစ်ခု: Non ယက်ဆွဲထားအိတ်
လက်ကားအရောင်းအ ၀ ယ် Custom Foldable Shopping Recycle PP N ...
ထုတ်လုပ်သူရောင်စုံ Aluminum Foil Tote Bag L ...
ရွှေ holographic ရုပ်ရှင်စျေးဝယ်အိတ် Shining lase ...
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအရောင်ထူးခြားသောရက်မဟုတ်သောဆိုင် Tpi Shoppi ...
စိတ်ကြိုက်ခေါက်နိုင်သောစျေးဝယ်ခြင်းအမှိုက်ပုံးအစိမ်းရောင် PP ...